TTSweet: ဘ၀အနားဖွာ ...
Posted by T T Sweet at 2:51 PM
rose of sharon November 23, 2011 at 3:13 PM
အင်း...အဲဒါဘဝပေါ့နော်.... အနာဂတ်ကို မမြင်ရတော့ ဘယ်လိုတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါ့...း((
susu November 23, 2011 at 3:49 PM
roseေ ပြာသလိုဘဲ..အနာဂတ်ကိုမမြင်ရ‌တော့ကိုယ်သာဆိုရင်‌ကော
သက်ဝေ November 23, 2011 at 4:07 PM
ကင်ဆာကိုတော့ ကြောက်တယ်။ ဆွေမျိုးနီးစပ်အန်တီကြီး ဟိုတလောကကပဲ ဘန်ကောက်ဆေးရုံမှာ ကင်ဆာလာပြတယ်။ လူနာရော မိသားစုပါ အရမ်းကို ပင်ပန်းရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရော ဘာရောဂါဖြစ်မှာလဲလို့ အဲသည့်အချိန်မှာ တွေးမိတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ပရမ်းပတာ စားသောက်ပုံနဲ့ လိုက်ဖ်စတိုင်လ်ကြောင့် ကင်ဆာဆိုတာ ဘာပဲပြောပြော ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ မမော်ကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
Myanmar Online Music November 23, 2011 at 6:07 PM
ဖိုးတုတ် November 23, 2011 at 6:24 PM
စင်ကာပူမှာ snake grass က ကင်ဆာတော်တော်များများကို ပျောက်တယ်လို.နာမည်ကြီးပါတယ်၊ လင့်ကိုအောက်မှာတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊
မြသွေးနီ November 23, 2011 at 7:31 PM
အနားဖွာတဲ့...၊ ချုပ်စတွေထွက်နေတဲ့ ဘ၀တွေ ရှိနေတတ်တယ်နော်။ ပုထုစဉ်ပီပီ အပိုအလိုမရှိ သပ်ယပ်တဲ့ ဘ၀မှာသာ နေထိုင်လိုမိတယ် အစ်မဆွိရေ...။
Your"puu win khan zar chin"hit my heart.We can't know what will come in our life.Let's try our best to be pleasant around us for the moment.
ချိုချို November 23, 2011 at 11:12 PM
မမော်ကို ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်မိတယ်။
ကိုယ်တိုင်လဲ မိသားစုအရင်းအချာထဲမှာ ကင်ဆာသမား ၂ဦးရှိခဲ့ဘူးတယ်..
ခုတော့ ဘ၀ရဲ့ အလှည့်အပြောင်း အကောက်အကွေ့တွေကို အငိုက်မမိရလေအောင် တရားဘာဝနာကို အချိန်ရသလောက် လိုက်စားရင်း
ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်လိုချင်တာချည်းပဲ ရွေးချယ်ယူလို့မှ မရပဲလေ။
စကားမစပ်ပြောရရင် မဆွိတီ ဒီပိုစ့်မှာ တင်ပြပုံ အရေးအသားက
အရင်တွေကလဲ ကောင်းပါတယ်..ခုက တကယ့်ကို ထိထိမိမိနဲ့ သွက်သွက်
လက်လက် ချက်ကျကျ ရှိလှတယ်....
mstint November 23, 2011 at 11:59 PM
မှန်းဆလို့မရတဲ့ လူ့ဘဝကြီး အစိုးမရတဲ့ အနာဂါတ်အတွက် အရာရာဟာ အနတ္တပါပဲ စွိတီရေ။
တရားမရှိဘူးဘဲပြောပြော၊ ကြောက်မိတယ် တီဆွိရယ်။
တီဆွိ ရဲ. အနီးအနားကတယောက်ယောက်အကြောင်းလားဟင်။ တီဆွိရဲ. စိတ်ကူးထဲက ဇာတ်လမ်းပါဆိုရင်လဲ ...ခံစားရပါတယ်။
Anonymous November 24, 2011 at 2:55 AM
တော်တော်ဆိုး။ အိပ်ခါနီးမှ လာဖတ်မိတော. စိတ်တွေ နောက်သွားတယ်။ ဟင်းနော်။
ခါတိုင်းလို ပေါ.ပေါ.ပါးပါး တီဆွိအကြောင်းတို.၊ ဂျုလေးအကြောင်းတို.၊ တခြား ဟင်းချက်နည်းတို.ထင်လို. ဖတ်လိုက်တာ၊ ခေါင်းကိုနောက်ရောဘဲ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုရေးတော.လဲ တီဆွိက “ချော”နေတာပါဘဲ။ တော်ချက်
Iora November 24, 2011 at 3:27 AM
ဘ၀မှာ မိသားစုဝင်တွေ ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရဘူးတော့ ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ ဒီလုိုအချိန်မှာ အလှအပဆိုတာ တင့်တယ်မှုဆိုတာ ဘာမှမတွေးနုိုင်တော့ပါဘူး။
rose November 24, 2011 at 3:42 AM
မမော် သနားပါတယ်နော်။ တီဆွိက အမြဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်စရာလေးတွေပဲ ရေးတော့ အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပဲ ဖတ်ချင်တော့တယ်။ ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းလို့။
ကိုဇော် November 24, 2011 at 5:26 AM
ရေးထားတာလေး ကောင်းတယ် အစ်မရေ။
Baby taster November 24, 2011 at 7:31 AM
T T Sweet November 24, 2011 at 10:19 AM
အဖြစ်မှန်နဲ့ တီဆွိဝင်ခံစားရတာကို ရေးထားတာပါ။ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်း group ထဲက မိသားစုတစ်ခုရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ၀င်ခံစားပြီးရေးထားတာပါ။ အမှန်က သူငယ်ချင်းမိသားစုက ပိုရင့်ကျက်ပြီး သိပ်တော်ကြပါတယ်။ တီဆွိကသာ ခံစားပြီး ၀င်ရေးတာပါ။ ကင်ဆာက စောသေးလို့ ကုရင်ပျောက်တဲ့ အဆင့်မှာရှိတယ်လို့ ဆရာဝန်ကြီးတွေက ပြောပါတယ်။ အားလုံး ဆုတောင်းပေးကြပါဦး။
ဘေဘီ November 24, 2011 at 11:11 AM
ခဏခဏ ၀င်ကြည့်မိတယ် ဘာများ ပြန်ရေးထားလဲလို့ပါ
ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ဆုးတောင်းပေးပါတယ်
အမြန်ဆုံး သက်သာပါစေ။ ပျောက်သွားတဲ့လူတွေ အများကြီး
T T Sweet November 24, 2011 at 12:15 PM
ကျေးဇူးပဲ ဘေဘီရေ။ ကွန့်မန့်ပေးပြီးသား ပိတ်သတ်တွေရော ဆုတောင်းပေးကြပါဦး။ ကျေးဇူးပါနော်။
San San Htun November 24, 2011 at 12:25 PM
ဖတ်ပြီး မောသွားတယ် တီဆွိရယ်...
mie nge November 24, 2011 at 2:25 PM
အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းပြီး မိသားစုနဲ့ တစ်သက်လုံးပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ပါစေ
Sandakuu November 24, 2011 at 7:31 PM
ကိုယ်ဆိုရင် အဲလောက်တောင်ခံနိုင်ရည်ရှိပါ့မလား...မသိဘူး..း(
I'm on the same boat with Ma Maw.I'm working asatest engineer in US and I have to travel around the States due to the nature of my job.My wife is nearly under same situation as Ma Maw's husband and I want to be around her to take care all the time, but I can't.When I read your post, I do feel the same way as Ma Maw, I knew exactly how she felt.I'm feeling the same way either.I'd like her to know that she's not the only one. Thanks for your post TTSweet.